पर्यटनग्रन्थ हो, एक दिन (समय कथा) | Janaandolan
Home साहित्य पर्यटनग्रन्थ हो, एक दिन (समय कथा)
पर्यटनग्रन्थ हो, एक दिन (समय कथा)
यो उनको चौथो कृति हो । दक्षिण एसियाका आधा दर्जन देशहरुको भ्रमण पश्चात तयार भएको यो कृतिले एउटा शन्देस दिने प्रयास गरेको छ । खास गरेर १४ बटा च्याप्टरमा लेखकले दुबई, श्रीलंका, भारत, कतार, बंगलादेश, सिंगापुर, मलेसिया जस्ता देशहरुले गरेका प्रगतिका कथा र हाम्रो देशले भोगेका पिडा समेटिएको छ ।
मुलुक बनाउन कति समय लाग्छ ? देश बनाउने कसम खाएर आएको नेतृत्वले चाह्यो भने मुलुक सिंगापुर बन्न सक्छ । मलेसिया बन्न सक्छ, त्यति मात्र होइन, आजको कतार र दुबईले गरेको प्रगतिलाई नियाल्ने हो भने हाम्रो मुलुक बनाउन केवल प्रतिबद्धता मात्र चाहिन्छ । आँट, धैयर्ता र त्याग चाहिन्छ । लेखकले यस्ता धेरै बिषय मार्फत यो पुस्तक बजारमा ल्याएका छन्, पत्रकारसमेत रहेका सिग्देलको पछिल्लो कृति एक दिन समय कथाले पूर्वको बजारमा बहस चलाएको छ ।
भ्रमणलाई केबल घुमफिरको रुपमा र मजा लिने माध्यम मात्र बनाएका नेपालीहरुका लागि यो पुस्तक एउटा गाइड बन्ने छ । अझ यसलाई पर्यटनग्रन्थको रुपमा लिने पनि छन् । पुस्तकको बारेमा लेख्ने दमक क्याम्पसका नेपाली बिषयका प्राध्यापक शिव रेग्मी प्रणतले भनेका छन्, यो एउटा पर्यटनग्रन्थ हो र यो पुस्तकले पाठकलाई यात्रा गराउँछ । उनकै टिप्पणीलाई आधार मान्ने हो भनेपनि यो पुस्तकले सफलता प्राप्त गर्ने छ ।
जहाँसम्म लेखक तीर्थ सिग्देललाई नजिकबाट नियाल्ने हो भने उनी एउटा राम्रा पत्रकार हुन् । आजसम्म चारबटा किताब लेखेपनि उनले आफूलाई कहिल्यै लेखक हूँ भन्न रुचाएनन् । मूलतः आफूलाई पत्रकारकै रुपमा चिनाउन चाहने उनले यसअघि कथासंग्रह मनोनेट निकाले । त्यसअघि पूर्वको राजनीति र जीवनको गति पुस्तक लेखे ।
कसो गर्दा देश बन्छ र त्यसका लागि देखेका र भोगेका कुराबाट पाठ सिक्नुपर्छ । आफैले भोगेको यर्थाथ हुन्छ । अरुकै गल्तिबाट पाठ सिकेर अगाडि बढ्नु नै श्रेयस्कर हुन्छ, किनभने आफ्नो गल्तिले उठ्न दिँदैन, लेखकले भनेका छन् ।
Previous articleमेची कोरोना अस्पतालमा संक्रमितको उपचारमा बेवास्ता, ज्यान गुमाउँदै बढ्दै
Next articleपीडामा हाँसेको जीवन
janaandolan - February 20, 2021
झापा । विर्तामोडमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच एक पत्रकारसहित तीनजनालाई पुरस्कृत गरिएको छ ।जयेन्द्रप्रसाद प्रसाई साहित्य सेवा कोषद्वारा कोषकै सभाहलमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच...
‘म भित्रको महाभारत’ को समिक्षा
janaandolan - February 13, 2021
विर्तामोड १ फागुन । डा. खगेन्द्रप्रसाद दाहालद्वारा लिखित पहिलो कृति ‘म भित्रको महाभारत’ छन्द कविता संग्रहको विर्तामोडमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच समिक्षा सम्पन्न भएको...
साहित्य पर्यटनग्रन्थ हो, एक दिन (समय कथा)